Ikhaya elimangalisayo eNecven elineWiFi kunye namagumbi okulala ama-2
Le ndlu intle yamatye enechibi ibekwe entliziyweni yePaki yeSizwe yaseKrka kwaye ilungele usapho oluncinci. Ihlotshiswe kwisitayela sendabuko kwaye inika yonke induduzo yeholide yokuphumla. Ungasonwabela isiselo kwi-terrace, i-barbecue, ukudlala intenetya yetafile okanye ukutshiswa lilanga ecaleni kwedama. Igumbi lesi-2 linomnyango owahlukileyo kunye negumbi lokuhlambela labucala. Jonga indawo yaseNečven kwaye undwendwele inqaba edumileyo, ebonelela ngembono yepanoramic yomlambo iKrka.
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 30 m / ivenkile 5 km / Amanye amanzi okanye indawo yokuqubha.(Ilitye/iPebble beach) 38 km / indawo yokutyela 12 km / idolophu ekufutshane(Sibenik) 29 km / amanzi(Lake) 4 km
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Necven